Aviva iye yamkelwa njengomnye wabenzi abaphambili befanitshala yangaphandle e-China kule minyaka ingama-22 idlulileyo. Amava amade anika bonke abathengi ukuzithemba okuqinisekileyo ukuba iimveliso zika-Aviva zikumgangatho ophezulu, zinesitayile kwaye zihlala zizinzile.
Nge ngeenxa zonke i-8000 yesikwere seemitha sendawo yokuvelisa kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-50 abasebenza kumzi-mveliso, ifanitshala yegadi yangaphandle yeAviva ingumnini kwaye isebenza zizibonelelo zayo zemveliso, ivelisa uMgangatho oPhezulu, Yonke ifanitshala yemozulu ngamaxabiso othe ngqo kumzi-mveliso.
Umzi mveliso wethu udume ngokuvelisa iiseti zokutyela zealuminium, iisofa zekona, iiseti zesofa, izitulo zentambo, isiseko setafile kunye netafile ephezulu kokubini ngaphandle nangaphandle. Baninzi abenzi befenitshala yegadi kwimarike, kunokuba nzima ukwazi ukuba ngubani umenzi onokuthenjwa ovelisa ifanitshala yangaphandle esemgangathweni okanye abo bavelisa ifanitshala enexabiso eliphantsi engakhiwanga ukuba ihlale ixesha elide.
Sisebenzisa kuphela ezona zinto zilungileyo zenziwe ngesandla zilukiweyo ngeplastikhi isakhelo sealuminium ifreyimu yokuqokelelwa kwayo kwefanitshala yangaphandle, ngelixa sisebenzisa ii-cushions ezikumgangatho ophezulu kwisitulo esenziwe ngealuminiyam kunye nokuqokelelwa kwesofa. Oku kukuvumela ukuba ushiye ifanitshala ngaphandle konyaka wonke ngaphandle kwengozi yokonakaliswa kwemozulu. Oku kubandakanya ukukhuselwa kwimozulu ebandayo, ukuqinisekisa ukuba irattan ayophuli okanye iphuke, nakwilanga ukuqinisekisa ukuba ifanitshala ayipheli.
Ifenitshala yepatio yangaphandle ye-Aviva ijolise ekuhambiseni ukubukeka okutsha okwenziweyo okusingqongileyo okunobuhlobo kunye nezixhobo ezigqwesileyo. Siyathenga, siqhubekeka kwaye sivavanya zonke izinto ezingavuthiweyo ngaphakathi endlwini ukuze sazi ukuba zingaphakathi iimveliso zethu.
Sisebenzisa iingcibi kunye nabasetyhini abaziingcali kulawulo lomgangatho. Iindawo zokutshekisha ezisemgangathweni zibekekile kwinqanaba ngalinye lemveliso ngokupakishwa, kuqinisekiswa ukuba iimpahla zakho zifika zikwimeko entle.
Ifenitshala yangaphandle ye-Aviva iza nesiqinisekiso seminyaka emi-3 eyonelisayo kubaxumi bayo kwihlabathi liphela, ngakumbi abathengi abavela e-UK, e-USA, Australia, Canada, France, Italy nase Turkey. Sikwadibana neemfuno ezikumgangatho ophezulu zabathengisi abakhulu abavela eAmazon.
Idilesi yomzi-mveliso: Vimba iB, iFlethi iphela, i-22 Haikou Road, iZhangcha Idolophu, iZiko leChancheng, iFoshan, iGuangdong, China
Ifowuni: 0086-757-8226 3754
Ifeksi: 0086-757-8272 1865